Hotel Projects International
Misa nge: obuyiyile zongezwa
Ithunyelwe ngu liu shing
Armati Yithini Indlela Lungiswa Common Iingxaki Faucet Water
avuzayo amanzi Namhlanje baye zintsonkotha ngakumbi, yaye umsebenzi yokufakela okanye zokusombulula ezi avuzayo uye waba nzima kakhulu. Inkqubo yokufaka faucet ndawo inkqubo efanayo kodwa ubuchwepheshe namhlanje izisa amacandelo ahlukeneyo ukuba kufuneka ukuba uyazi ukuba.
Xa sele elidityaniswe, eminye imiba enokuchaphazela ukusebenza faucet yakho, ezifana ezivuzayo, squeaks kunye nezinye iingxaki.
Makhe ndiwele eminye imiba eziqhelekileyo nendlela uzisombulule.
Ngokuqhelekileyo, uxinzelelo lwamanzi evela faucet kubangelwa diverter yayo sisitshizi. Ivelufa diverter yi intwana encinane ngaphakathi emzimbeni faucet. Le diverter elawula amanzi Masingene faucet, ngoko kufuneka uhlole ukuba uhlambulukile, ukuze ugcwale udoti encinane kunye neeminerali. Ukuba diverter ayenziwanga kucocwe, kungafuneka ukubuyisela diverter.
Enye indawo ukuze nibe ngumtyholwa kuxinzelelo yamanzi ephantsi lo empompeni. Le empompeni efana diverter unako mayicocwe ibhrashi kunye nokucoca nesisombululo. Ungazama ukusebenzisa iviniga ukususa izixhobo unclog ngayo.
Ekugqibeleni, qinisekisa ukuba ingxaki ayikho uxinzelelo amanzi ephuma evela ezilijelo ujonge ukuba kwemithambo unikezelo lwamanzi zivuliwe yonke indlela.
Spray Misting evela Faucet
Ukuba amanzi isipreyi inkungu angabikho ukuhamba engundoqo xa usebenzisa i faucet, ungafuna ukukhangela ukuba empompeni kwiglasana ebethelelwa nkqi.
Sebenzisa ilaphu okanye ibrashi ukususa izimbiwa, iteyiphu okanye nobutyobo evela empompeni, njengokuba iza ivalekile. Qinisekisa ukuba nabo khangela iqhoshana empompeni.
Ufake empompeni uze uhlole kwakhona. Ukuba ingxaki nangoku ubonisa up kuya kufuneka ukuba indawo empompeni njengoko ukuze esisikekileyo okanye yonakele.
Faucet Ukuvuza Handle
Xa ufumanise ukuba ukuvuza faucet kwamanzi, zama retaining nut ukupakisha kwi emphinini, njengoko oku ukuba oyena nobangela evuzayo.
Ngamanye amaxesha ezonakeleyo O-ring kufuneka itshintshwe.
Ukubuyisela O-umsesane, wavala umgca unikezelo lwamanzi, ibattery i faucet kwaye endaweni iCartridge ukuba kuyimfuneko, kuxhomekeke ingxaki nayo. Xa indawo o-amakhonkco, ekucoceni ngaphakathi Senga kunye ngaphandle komzimba vana. Siyaleza kwakhona yokuqaba Senga o-amakhonkco kunye grease abicah-based.
Wehla evela Senga
Enye ingxaki exhaphakileyo wehla usuka Senga faucet. Ukuba uhlohla faucet uhlobo ucinezelo, kuya kufuneka ukuba ukubuyisela iqhoshana isihlalo kunye / okanye ukubuyisela isihlalo vana.
Ngokuba zonke ezinye avuzayo amanzi, kuya kufuneka kuphela indawo isihlalo vana.
Xa usiva isandi emva kokuba ukucima i faucet amanzi, oko kungaba isando amanzi. Oku kunokuba ingasombululwa ngokufaka egumbini umoya.
Ukuba sele ifakiwe namagumbi umoya, cima amanzi, uwutshise umgca yamanzi babuye amanzi umva kwakhona. Xa kwenzeka ingxolo emva kokuba faucet amanzi ivuliwe, ivelufa ekunokufuneka ukuba iqhoshana elitsha, okanye uxinzelelo lwamanzi ukusuka kumgca lobonelelo mhlawumbi phezulu kakhulu okanye asezantsi kakhulu.
Handle Faucet Nzima zokuSebenza
Ngokuqhelekileyo nzima ukusebenza nomqheba ukuze yenzeke ngenxa neetyuwa okanye nobutyobo ziye yonakele le iCartridge.
Kobutyobo, amaqhosha zesinyithi kunye neeminerali zingonakalisa itywina ngaphakathi iCartridge.
Ungafuna kwakhona kufuneka ukubuyisela iCartridge okanye kuthambisa kunye grease abicah-based. Musa ukusebenzisa grade faucet grease osebenza ngemibhobho yamanzi ukuba, isipreyi lesilicon okanye nayiphi igrisi ezinokuba petroleum. izithambiso Petroleum-based kusabela kunye irabha ezitywine angabanga isiphatho abe ngakumbi nzima ukusebenza.
Armati Bafundise ukuba IsiKhokelo Indlela Khetha Ilungelo Plumbing Pipe
Kukho iintlobo ezininzi imibhobho ngemibhobho yamanzi ukuba Izakhiwo zokuhlala okanye zorhwebo. Imibhobho Plumbing ezifana PEX, ibhrasi ne PVC zisetyenziswa ngokuqhelekileyo ngokuxhomekeke izicelo zabo indawo apho zifakelwe. Ukongeza kukho ezinye iintlobo yombhobho kwimibhobho ezifana abamnyama, ngesinyithi nobhedu. Makhe sibone ngezantsi isicelo ilungileyo imibhobho zixhaphakileyo kwimibhobho ezisetyenziswayo.
pipe steel stainless. Photo Hans Pixabay
steel stainless unokukhangela kakuhle kakhulu kodwa ke umbhobho sentsimbi expensive.Stainless kakhulu asetyenziswa kwiindawo phantsi ngokudleka kufutshane kwimimandla yonxweme. Olu hlobo inqawe ifumaneka enokuguquguquka ziqinile kwaye kuya kufuneka ezinye yemiqadi yokuhlanganisa ezithile abaqeshwe kwezinye iindidi imibhobho. Musa ukubhidanisa imibhobho insimbi imibhobho kwalenza. Kuyinto ifumaneka ngobukhulu kunye nobude.
PEX yesidala ezininzi. Photo Makdesignbuild.com
Pex eziyi- na igiza bhetyebhetye yeplastiki ukuba sele ukhetho ithandwa kwizicelo zoshishino zokuhlala kunye amancinci. Nangona iindleko eziphezulu kancinci zokuqala, nokugcinwa kwayo ezincinci kunye nenkqubo yokufaka fast kwenza umbhobho ilungileyo ukusasazwa amanzi ngaphakathi kwisakhiwo. PEX eziyi- inikezela ngokwenene ayivuzi eziluncedo umnikelo imveliso phezu igiza zezobhedu. Enye kubakho iingxaki ibalulekileyo kukuba lithe ezisetyenziswa kwizicelo ngaphandle kuba UV ray umonakalo inwebu yeplastiki yangaphandle.Kaninzi
Imibhobho yoBhedu Used in Plumbing
copper acocekileyo emva kokuba sele kunqunyulwa. Photo Cedarcityrecycling.com
Imibhobho nobhedu mhlawumbi umbhobho ezininzi kwimibhobho zemveli ezisetyenziswayo ngenxa ubude lwabo olunzulu kunye nokuthembeka. Bona zinika nokumelana ophezulu, izinto ezinkulu eziza kusetyenziswa amanzi ashushu nabandayo, kwaye zilawulwe lula. Noko ke, eyona nto ibalulekileyo ukuqwalasela phambi kokusebenzisa igiza sobhedu kukuba kufuneka soldered kunye yaye kuya kufuneka izixhobo ezongezelelweyo. Asingabo bonke yinto elungileyo kwi imibhobho yobhedu ngelotha, kodwa inqaku Indlela Solder Imibhobho yoBhedu okunokukunceda.
Imibhobho ngemibhobho PVC zisetyenziselwa amanzi aselwayo abandayo yaye litshisa kwakunye ngezicelo kwelindle. Imibhobho PVC iyahluka kwi ubukhulu zabo uqwalaselo kuxhomekeka isicelo apho siya kusetyenziswa ngayo. Umzekelo, imibhobho yamanzi nengcinezelo, akunguye ngokufanayo imibhobho umjelo, kwaye hayi olufanayo asetyenziswa uqhwithela yamanzi. iimveliso ngemibhobho yeplastiki eyenzelwe izicelo yamanzi aselwayo zidla elinyuliweyo nokuba "NSF-PW" okanye "NSF-61" ukubonisa ukuba imveliso iyangqinelana neemfuno eyingozi empilweni NSF / ANSI Standard 6.
Imibhobho Plumbing kwalenza
pipe kwalenza. Photo Ekhaya Depot
Imibhobho Isefu yasetyenziswa kwiminyaka emininzi eyadlulayo njengoko umgangatho yeeprojekthi zokuhlala. Nangona kunjalo, ngexesha isetyenziswa ngaphantsi rhoqo kuba namhlwa ukwakha ukuya ngaphakathi imibhobho omncinci. Ukuba inqawe mdala ngokwaneleyo, ngoko ungabona amanzi avela faucet kunye nentwana umhlwa njengoko isikali nawaphula ubengo kuyo ngaphakathi yombhobho. Imibhobho Isefu ingasetyenziswa ukuthutha amanzi angwevu okanye amanzi angaselwayo.
Imibhobho Brass Used in Plumbing
Brass ngemibhobho yamanzi. Photo EugenesDIYDen Pixabay
Imibhobho Brass imibhobho ekwazi ukumelana irusi enkulu igiza, ukuba loo nto yenziwe 67% ukuya 85% zezobhedu. The best umbhobho sobhedu grade ifunyenwe xa ingxubevange iqulethe 85% yobhedu kuthiwa umbhobho ngobhedu ebomvu. Brass eziyi- inikeza izinto kwantlandlolo loo nto umhlwa kwi embindini kwaye ayithethi kubangela ilahleko zochuku ngaphakathi umbhobho. Imibhobho Brass imibhobho lula ukuba kuhlohlwa ngaphezu imibhobho zentsimbi kunye elisemagqabini ashushu-amanzi kunye neenkqubo nokwabiwa enkulu, efana nesingxobo impompo, amatanki amanzi, kunye nemithombo. pipe Brass ngokuqhelekileyo badla ukuba athathe ixesha elide ngaphezu nayiphi na enye into ngemibhobho yamanzi. pipe Brass ngokubanzi iza ku 12-unyawo ubude tye.
Yenzani Iron babetha
Siphose kombhobho yentsimbi. Photo McWane, Inc.
Imibhobho ngemibhobho Siphose intsimbi zidla ezenziweyo njengohlobo intsimbi-ze-spigot. Izakufunyanwa kunye amalungu yangaphakathi kodwa zibiza imali eninzi intsimbi kunye enye spigot. Ezi imibhobho lunzima kunayo nayiphi na enye imibhobho, ngokuqhelekileyo kusetyenziswa kwiinkqubo ukuhambisa amanzi, okanye ufakelo komhlaba njengoko kumbhobho omkhulu kwi semibhobho okanye umjelo systems. Ubukhulu omncinane esimele ngokuqhelekileyo kukuthi silwenza yi 4 "umbhobho, inkulu ngokwaneleyo ukuba isetyenziswe kwizicelo zokuhlala. pipe intsimbi Siphose sinzima kwaye kufuneka ixhaswe xa nithe nahlangana nti.
Armati Yithini Izindlu zangasese: yangasese ukuthengwa Guide Tips
Zangasese izixhobo ezibalulekileyo ezisetyenziswa rhoqo kwaye elinye lamaqhosha ezininzi ngabomi na indlu yangasese. Abantu baya kugxininisa ngakumbi phezu yokuvasa okanye ngamampunge kunokunikela ingqalelo yangasese. Kukho iintlobo ezininzi kweethoyilethi, ezifana, inqanaba zemveli phantsi, emva eludongeni, udonga hung, yaye abaninzi ngakumbi. Kodwa kubalulekile ngokwenene ukwazi ukuba zonke zangasese izindlu ezisemgangathweni. Ngoko ke, qiniseka ukuba ukujonga sisikhokelo lwethu yokuthenga yangasese.
Iindawo zokuchopha zendlu yangasese ukuthengwa Guide
kuya kunceda Esi sikhokelo ukuthenga yangasese phambi kokuba uthenge yangasese yakho elandelayo. Ngoko ke, qiniseka ukuba:
Gqiba ukuba uza kusebenzisa enye okanye isiziba ezimbini yangasese
Le yangasese ekhethiweyo iya kuba ngokuhambisana nemigangatho lendawo
Khetha uhlobo yofakelo
Umlinganiselo indawo efumanekayo apho yangasese kuya kufakwa
Xa kunokwenzeka, zama ukuthenga yangasese ukusuka kwigama sokuthengisa
Gqiba phakathi isetyhula okanye evuthelweyo isitya yangasese
Ukongeza kwisikhokelo ukuthenga le, nabo ingqalelo ezi mpawu zibalulekileyo yangasese
Amanzi Saving- Ezinye zangasese enokuba iziqinisekiso ingqiqo amanzi, izindlu zangasese eliphezulu-kakuhle ukuhlisa kunye iilitha 1.28 okanye ngaphantsi ekugungxulwa, xa kuthelekiswa ne-1.6 eelitha zangasese eziqhelekileyo.
Dual Flush- Ingaba ufuna ukukhetha toilet unokukunika amandla ukuba ithoyilethi ongagqibelelanga ezingamanzi okanye ezigungxulwayo epheleleyo inkunkuma eqinileyo?
Iindawo zokuchopha zendlu yangasese zangasese Bowl Height- Comfort zithathwa ngokuba zangasese non-yemveli. A undi isitya standard isendaweni 15 intshi ngaphezu emgangathweni, kodwa zangasese nezitya kwi 17 intshi zigqalwa ezona zilungileyo. A intshi 17 nkqu 19 intshi yangasese isitya ukuphakama kwakhona iya kuba ngokuhambelana baseMerika abaKhubazekileyo Act.
Bowl shape- An isitya evuthelweyo, nangona ithatha indawo ngakumbi, inikeza indawo ngakumbi yokuhlala kwaye ivumela amavumba ezimbalwa ukubaleka. Thatha ingqalelo oku njengento isitya evuthelweyo lingade liye kufika 6 "elide isitya eqhelekileyo.
One Piece zangasese intwana Toilet- Ababini zitshiphu enye kodwa ke ube accumulated uthuli phakathi itanki kunye isitya. zangasese piece-One ayabiza kakhulu kwaye kube nzima ukuyifaka ngaphezu kokuba yangasese intwana ezimbini. Ke ukusebenza ukuba phantse efanayo.
Egungxulwayo sokulumkisa Systems- yerabha zizinto zexesha elidlulileyo. Khangela ezinde egungxula entsha ukuba zithembekile ngaphezu sokulumkisa ubudala. zangasese uxinzelelo-ukuncedisa ezi flushers namanzi ngendlela efanelekileyo ngaphezu zangasese womxhuzulane.
Sokohlula- Yiya emva zangasese koko kufuneka ubuncinane 3 intshi ezigungxulwayo vana. zangasese zemveli abe 2 intshi vana ondinikeleyo ukuwutyhalela ngaphantsi kwe ezintsha.
Elihle-in Dimensions- Umgama ukusuka eludongeni umva emnyango umgca amanzi yahluka ukusuka model kukhombisa, ngoko cela ngaphambi kokuba ufumane yangasese yakho entsha.
Ingxolo Noise- kungaba ngumba xa yakho yangasese kuya kufakelwa kufutshane kwiindawo eziphakamileyo ukuba sendleleni.
Color- Ngaphezu 80 ekhulwini iphele emva emhlophe yemveli, nangona abantu abaninzi ngakumbi ngosuku ngalunye bazama imibala ezintsha ezingaqhelekanga.
Water meni- Sebenzisa imigca amanzi steel stainless bhetyebhetye endaweni okanye imigca ubhedu ziqinile chrome-aluka.
Sokohlula- Thulani-Off Kukho iintlobo ezininzi unxibelelwano ukuba isivingco ovalelweyo-off. uqhagamshelwano Solder kwaye uqhagamshelwano ucinezelo zezona wamsebenzisa kakhulu, kodwa qiniseka ukuba awunayo imibhobho zentsimbi endala njengoko ukuze kufuna uhlobo lonxibelelwano ezahlukeneyo.
Ngabo aba abenzi yangasese top ukuba ungafumana kwi US. Konke kuya kuxhomekeka kwizinto ezidlulileyo nendlela imali umxhamli ukulungele ukuba ahlawule.
Toto-Toto yenye 3 omkhulu abenzi yangasese
Kohler- Kohler inika iimveliso elungileyo kakhulu ngamaxabiso elifanelekileyo.
American Standard-ixabiso ecocekileyo, yangasese eMiselweyo yaseMelika eyimbangi befanelekile.
Armati Bafundise wena ithawula Bar yoFakelo Height kunye nezinye izincedisi Bath
Itawuli Ring neZinye Igumbi lokuhlambela eyongezwayo Heights Ufakelo
izincedisi yangasese iqhele enye yezinto zamva ukuba kufakelwe xa isakhiwo okanye ngexesha lenkqubo yokwakha. Noko ke, ukuba andazi ukuba ukufaka njani yaye phi izincedisi lokuhlambela, ngoko unga ukubaleka zibe iingxaki ezinkulu njengoko kufuneka kugrunjwa phezu tiles ebangela umonakalo yi kusombiwa ngokungeyomfuneko. Nazi ezinye eziphakamileyo Kuyanconywa ukuba ungasebenzisa xa ufaka nezincedisi lokuhlambela.
Khumbula ngamaxesha onke kabini khangela anekhowudi yakho yokwakha zasekuhlaleni kunye nezikhokelo ADA.
Uninzi lwezi eziphakamileyo kucetyiswa zithathwa International Code Residential (IRC), iimfuno amaMelika abaKhubazekileyo Act kunye ipapashwe yi-National Kitchen & Bath Association.
Nezibuko ingafakwa kwi kubude eyahlukileyo ngokuxhomekeke kuhlobo kwisipili kokuba ifakiwe. Njengesikhokelo jikelele, ade ifakwe phakathi 38 kunye 42 intshi. Le wemilinganiso ezinxulumene ukuphakama emazantsi esipilini, elinganiselwa ukusuka emgangathweni ekugqibeleni. Ingcebiso yam ukuba isipili uya mayixhonywe ngohlangothi emazantsi kumphezulu ebonisa hayi ngaphezulu kwe intshi 40 ngaphezu komgangatho entanjeni. Ngamanye amaxesha uya sifuna ukuba kwisipili kunye eludongeni kunye amampunge ukulungiselela iinjongo zobugcisa. Kuyanconywa ukuba ufake sisipili ngokupheleleyo-ubude eyodwa washroom nganye xa ibhafu iza kusetyenziswa luluntu.
Height yoFakelo for iishelfu zegumbi
Komele zifakwa ezisezintabeni ezahlukileyo ngokuxhomekeke ukusetyenziswa kunye nohlobo kwithala kokuba ifakiwe. Ngokwesiqhelo ke ingafakwa phakathi kweenyawo 3 neenyawo 4 kakhulu, njengoko mirrors.However, le nto iya kwahluka ngokuxhomekeke kuhlobo zangasese yaye kukho umkhwa omtsha ukuba yayigcinwa endaweni ezishelifini.
Indlu yangasese Accessories Ukufaka: isepha Dish / isepha wekhadi
Esityeni isepha kufuneka ifakwe kwi-ubude obumalunga intshi 44 okanye phezulu 54 intshi. Indawo ukuphakama isepha dish liya kuba kuphuma isitshizi kwiishawara. Nangona kwisixhobo isepha kufuneka sifakwe kwi ubuncinane i intshi 40 yaye phezulu 48 intshi. Ngokufezekileyo dish isepha iya kufakelwa 48 intshi; kunjalo, ukuba ngaba kukho kwisixhobo isepha, amaqhosha zabo atyhale kufuneka zibekwe 44 "ubuninzi ngaphezu FF.
Itawuli Ring Installation Height
I ring itawuli kufuneka ifakwe phakathi intshi 50 no 52 intshi ukuphakama, kulinganiswa ukusuka emgangathweni ekugqibeleni. Ukuba enilinganisela kwi inkohlakalo ke uya lokusila 20-22 intshi ngaphezu kwayo. Ngokubanzi, ukuphakama ngokupheleleyo ubuncinane yi 36 "ngenxa iitawuli, 18" kuba amalaphu yokuhlamba kulinganiswa ukusuka usule ingamampunge.
Ufakelo ukuphakama itawuli kaloliwe ziya kwahluka ngokuxhomekeke kuhlobo kunye nokusetyenziswa lokuhlambela. Ngololiwe iya ayifakwanga kwi ukuphakama efanayo xa lokuhlambela iza kusetyenziswa ngabantwana. A rail itawuli iya kufakwa intshi 48 ngaphezu emgangathweni. Ufuna khangela kwakhona indawo lweevenkile zombane kunye nomsebenzi tile nokuhombisa. Xa ufaka komzila itawuli ezininzi, ukulinganisa uya kuba aphezulu, uze ulisonge itawuli kwelo nqanaba.
Mark 2 intshi ngezantsi kwe ariya apho emazantsi ngetawuli kwaye kufuneka indawo ukufaka i ngololiwe yesibini.
Iindawo zokuchopha zendlu yangasese Paper Roll Holder Height?
Umnini roll toilet paper ingafakwa phakathi 19 kunye 26 intshi ukusuka emgangathweni. AmaMelika abaKhubazekileyo Act Ukhuthaza usebenzisa 19 intshi lo gama i-National Kitchen & Bath Association icebisa 26 intshi njengoko ukuphakama efanelekileyo. Ukuba ngaba awunayo i eninzi isithuba, ungafuna ukuqwalasela ngokuthanda kwi ecaleni ngamampunge.
Indlu yangasese Accessories Ukufaka: iKhabhinethi
nekhabhathi yangasese ivame zafakelwa intshi 54 ngentla kumgangatho ugqibile. Oko kuba ngokuqhelekileyo uya kuba 36 intshi amampunge standard kunye 18 iziisentimitha yebar phakathi. Maxa wambi indibanisela isipili / IKhabhinethi ukhethe ngoko qiniseka ukuba kube efakwe kwi 12 intshi encotsheni usule.
Indlu yangasese Accessories Ukufaka: Bambani neeBhari
imivalo bokuthatha kufuneka ibekwe ubuncinane 33 "-36" ngaphezulu komgangatho. Xa ufakelo phezu kodonga kwicala bar mbambe uya kuba 42 intshi ubuncinane elide, ibekwe 12 intshi ubuninzi ukusuka eludongeni ongasemva kunye nokunabisa 54 intshi ngasemva wall.There ulwazi olongezelelweyo malunga uzifake njani bar uthathe, njengoko isincomo abaseMelika noMthetho abanokukhubazeka kwinqaku lethu malunga imivalo Bambani.
Height yoFakelo ye Hand yokomisa
yokomisa ngesandla ube nezikhokelo ngakumbi ezithile, njengoko kufuneka bakwazi izosebenza ngokulula ngokusebenzisa iiyunithi ubuncinane kuphela force.These iya kuhlangana imilinganiselo ADA ezithile ngokuphathelele indlela yimalini na ezivelileyo kwaye kufuneka ibe ukusuka umbala nokuchasanisa. Iqhosha lokutyhala kufuneka ifakwe kwi-intshi 38 ngasentla FF nge ubuncinane isithuba kumgangatho ocacileyo 30 "x 48" phambi them.When isomisi ngesandla ngaphezu kwesinye ifakiwe, iyunithi yesibini ingafakwa phakathi 42 "-48" ngaphezu floor ogqityiweyo.
Hlaziya yangasese yakho kuhlaziya ipeyinti kwi ebhafini.
Vumela Nature nge Shower yangaphandle
iishawa zangaphandle nje nje poolside kunye namanxweme zoluntu kwakhona. ukuba ke ngokukhawuleza Ukongeza sihlaziyeke kwigumbi lokuhlambela kwikhaya ngemihla.
Armati Bafundise kuwe Anatomy of a ebhafini kunye Indlela Faka Replacement
Funda konke malunga kwiibhafu kuquka susa kwaye ubuyisele enye nendlela.
Armati ndizakufundisa ungeza njani Faka i-Anti-umphunga Valve
Misa utshintsho ubushushu amanzi ishawa ngesiquphe ngokufaka kwivelufa anti-umphunga in hlambi.
Le ishawa kit compact kodwa ezinamagama can ezamahala up isithuba emanzini encinane.